San Htun's Diary: ဘုရင်နေသောမြို့...
ကိုချစ်တဲ့သူတွေ ရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကို ခွဲခွာရတာ နာကျင်
ခုတော့ စန်းထွန်းရဲ့ မိုင်၉၀၀ခရီးစဉ်စပြီပေါ့နော်....။
ဒီဘလော့လေးကိုရောက်တိုင်း ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရသလို စိတ်ဝင်စားအောင် ပုံတွေနဲ့ ညှို့ခေါ်သလိုပဲ စန်းစန်းရေ။ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတွေမို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်တစား အလည်သွားချင်တယ်။ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ အောင်မြင် ရှုံးနိမ့် အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ကြုံခဲ့ရမှာ အသေအချာပေါ့။ ဘ၀ဆိုတာ ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရမှာနေရမယ်လို့ ပဉာတ်ထားပြီးသားပါ စန်းစန်းရေ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဌာနေရောက်ပါစေ အဆင်ပြေဘို့သာအဓိကမို့-
ကုိုယ်တုို့ စန်းထွန်းတုို့ တွေကတော်ရာမှာနေရင်းပျော်အောင်ကြိုးစားနေ
စန်းထွန်းရဲ့ နေရာသစ်လေးအကြောင်းကုိုယ့်ရဲ့ ပြူတင်းသစ်လေးကုိုကြည့်ရင်းစောင့်နေမယ်။
အားတင်းထား စန်းထွန်းရေ၊၊ တစ်ခြားသူတွေလည်း ဒီလိုပဲ လှည့်လည်နေရတာပဲ၊၊ ကျနော်လည်း တစ်နေ့တော့ အဲဒီလိုပဲ တစ်ကိုယ်တော်ရွက်လွှင့်ရအုံးမှာ၊၊ နယ်မြေသစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေနော်၊၊ ကန်တတ်ကီမှာနေတယ်ဆိုလို့ တွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေမိတာ၊၊ တစ်နေ့တော့ ဆုံလိုက်ကြအုံးစို့၊၊ ကြိုးစားထား :) တိမ်ပြာ(မနောမြေ )
အနှီတစ်ချက်တည်းနဲ့တောင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပေါ့ စန်းထွန်းရေ...သည်တစ်ပုဒ်ဖတ်ရင်းနဲ့ ချစ်သူရဲ့မြို့တောင် နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရပါသဗျား...
ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ရောက်ရာအရပ်မှာ ကြုံသလို ပျော်အောင်နေနိုင်တဲ့ စန်းထွန်းကို ဟိုက်ဖိုက်ပါပဲး)
ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရတာ လွမ်းချင်စရာကြီးပါလား စန်းထွန်းရေ။ ကာယကံရှင် စန်းထွန်းကတော့ တစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဆွဲကိုင်ထားသလား မှတ်ရတယ်။ အမေရိကားတစ်ခုလုံး သူမနေဖူးတဲ့ နေရာ မရှိဖြစ်နေဦးမယ်။ Kentucky ကိုမြင်တော့ KFC ကို ပြေးမြင်ယောင်မိသား။ ကေအက်ဖ်စီက အဲဒီမြို့က စခဲ့တာတဲ့။
ဘဝထဲက အမှတ်တရတွေထဲမှာ .. လွမ်းမောစရာတွေကလည်း မနည်းပါလား စန်းထွန်းရေ... အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ..နော် ..
All the best Nyi ma lay yay. I am also in U.S and has been working and moving for quiteaperiod of time. I totally understand your feelings. (You make me smile as I also amavery slow drive and got honked at every now and then :)))Now you will be moving to Maryland ? I am in PA, so we aren't very far. Will be looking forward to read your experiences in Maryland.
မရောက်တာ ကြာနေပြီမို့ အရောက်လာခဲ့ပါတယ်.. ခွဲခွာရခြင်းဆိုတာမျိုးက တကယ့်ကို ပူလောင်နာကျင် ရပါတယ်နော်.. နေရာဒေသအသစ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ အားတွေအပြည့်နဲ့ကျန်းမာစွာ ရှိပါစေ။ အခက်အခဲတိုင်းကို အောင်မြင်စွာဖြင့်